Best Buy သည် Apple Watch ကိုရယူနိုင်ခဲ့သည် ငါက Mac ကပါ
Best Buy သည် Apple Watch ကိုရယူသည်
ယရှေု Arjona Montalvo | | Apple ကပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်, Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, NOTICIAS
ပြီးခဲ့သည့်လကုန်တွင် Apple Watch သည်စတိုးဆိုင်များတွင်ရောင်းချနိုင်ကြောင်းသတင်းများရရှိခဲ့သည်Best Buyသြဂုတ်လတွင်။ အရောင်းဟိုစတင်ပါပြီသြဂုတ်လ 07 ရက်။ သူတို့ကတိပေးခဲ့သည့်အတိုင်း Apple Watch သည် Best Buy တွင်ရောင်းချရန်ရနိုင်သည်။
ကန ဦး အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတို့ကိုတစ် ဦး တွင်ရောင်းချလိမ့်မည် 100 ခန့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်၏ကန့်သတ်။ "Best Buy'' ရောင်းသည် Apple Watch အားကစား (အလူမီနီယံ) နှင့်အတွက်စျေးအကြီးဆုံးမော်ဒယ် သံမဏိ Apple ကနာရီယုတ္တိနည်းအရ Apple Watch Edition ကရောင်းချတာမဟုတ်ပါဘူး.
အွန်လိုင်းအရောင်းများကိုယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ စာရင်းရှိသည့်စတိုးဆိုင်များတွင်သင်၏ Apple Watch ကိုယခုအွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးသည့်အတိုင်း 'Best Buy' စတိုးဆိုင်များ သူတို့ကအမေရိကန်နှင့်မက္ကဆီကိုတွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်.
Apple Watch နှင့် Apple Watch Sport မော်ဒယ်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောချိန်ညှိချက်များရှိသည်။ သူတို့ကတစ် ဦး ပေါင်းစည်းပါပြီ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးတစ် ဦး ချင်းစီလုပ်ဆောင်သမျှအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဒါတွေအားလုံးကို Apple ကိုပေးမှာပါ ရောင်းအား၏ကြီးမားသောပမာဏကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင်ဟာ Apple Store နဲ့မရင်းနှီးဘူးဆိုရင်တော့အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာသူတို့လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။
El စျေးအကြီးဆုံးနာရီ Best Buy စတိုးဆိုင်များတွင်တွေ့ရသောအချက်မှာအနည်းဆုံးအစမှာသံမဏိဖြစ်သည် ၄၂ မီလီမီတာမီလန်းသိုင်းကြိုးနှင့်အတူ။ ဒါကအထူးသဖြင့် configuration ကိုမှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် $ 699.99။ Apple Watch နှင့်အတူ, သင်အရင်ကပြောခဲ့သကဲ့သို့များစွာသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများစွာကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်အရင်တင်ခဲ့သောဝက်ဘ်ကိုကြည့်ရှုပါကများစွာရှိသည်။ Third-party ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်အကာ၊ အကာများ၊ ကြိုးများနှင့်အခြားအရာများစွာပါ ၀ င်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် » Best Buy သည် Apple Watch ကိုရယူသည်
အရာအားလုံးကိုအသစ်ပြန်လည် Apple ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကောင်းစွာစီစဉ်ခဲ့သည်